पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ पौष २८ गते (सन् २०२१ जनवरी १२ तारिख) मंगलबार - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ पौष २८ गते (सन् २०२१ जनवरी १२...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ पौष २८ गते (सन् २०२१ जनवरी १२ तारिख) मंगलबार
२८ पुष २०७७, मंगलवार ०८:५०
मेष – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । सभा–समारोहमा मान पुरस्कार प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्ला । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । लगानी उठनेछ । पारिवारिक सुखशान्ति बढ्नेछ । साथीभाइको साथ मिल्नेछ । ऐश्वर्य बढ्ला । अन्नधन वृद्धि हुनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । सन्तान सुख पाइनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । मान महत्त्व बढ्ला ।
मिथुन – मिठो भोजन प्राप्त होला । शुभ काममा आकर्षण बढ्नेछ । यात्रा हुने र सुख समृद्धि बढ्ने सम्भावना रहनेछ । आरोग्यता बढ्ला । आयात–निर्यातसित सम्बन्धित काम बन्ला । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साहमा बढोत्तरी हुनेछ । घरपरिवारको स्थिति सुखदायक रहला । मान प्रसिद्धि बढ्नेछ ।
सिंह – आयवर्द्धक कार्य बन्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । हाकिमको साथ प्राप्त होला । आर्थिक र बौद्धिक प्रगति होला । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ला । सभासमारोहमा मान पुरस्कार मिल्नेछ । घरेलु चिन्ताको समाधान पनि मिल्नेछ । मनमा सन्तुष्टि होला । आयवर्द्धक काम बन्ला । विजयश्री मिल्नेछ । साहसिक काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । सुख सुविधा बढ्नेछ ।
धनु – समयले साथ दिनेछ । कार्य क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । यश वर्चश्व वृद्धि हुनेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । पारिवारिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । श्रेष्ठ व्यक्तिको साथ मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्ला । नयाँ दायित्व पाउनुहुनेछ । मनोकूलको काम बन्नेछ । आँट उत्साह बढ्ला । मान पुरस्कार मिल्नेछ ।
अघिको समचार राप्रपा नेपालको आयोजनामा वृन्द्धावनमा २९९ औं पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस
अर्को समचार दमकको बेलडागी भुटानी शरणार्थी शिविरमा आगलागी, १ को निधन, ८ लाख बराबरको क्षति